Eoropa Afovoany & Atsinanana · Avrily, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Afovoany & Atsinanana · Avrily, 2018
Tantara mikasika ny Eoropa Afovoany & Atsinanana tamin'ny Avrily, 2018
Rosia 30 Avrily 2018
Kosovo 30 Avrily 2018
Belarosia 29 Avrily 2018
Makedonia: Andro fahalalahan'ny rindrambaiko
Makedonia 28 Avrily 2018
Ao anatin'ny Andron'ny fahalalahan'ny rindrambaiko manerantany, nikarakara hetsika fanin-telony tao tao afovoan-tanànan'i Skopje ny Free Software Macedonia. Tamin'ny 4 Oktobra, nizara bokikely sy kapila mangilatra ahitana Linux Ubuntu izy ireo, izay nomanina manokana tamin'ity indray mitoraka ity
Rosia 27 Avrily 2018
Miantso ireo mpamily fiara sy ny toeram-pisakafoanana ny mpandeha an-tongotra mba tsy hibahan-dalana
Makedonia 25 Avrily 2018
"Tsy misy olana, mahita lalana handehanana foana ny marary [mibahana eny amin'ny sisin-dalana fandehanan'ny mpandeha an-tongotra ny fiara, hita hatreny amin'ny hopitaly]. #SehaBahoaka"
Inona indray ny lahatsoratra nahasarika ireo mpamaky Global Voices tamin'ny herinandron'ny 16-22 avrily 2018?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Avrily 2018
Nandritra ny herinandron'ny 16 ka hatramin'ny 22 Febroary 2018, ny momba an'i Taiwan no tantara malaza indrindra tao amin'ny tranonkala amin'ny teny Indoneziana. Ary ny an'ny tranonkala amin'ny teny Poloney ? Ny tantara iray momba an'i Meksika.
Rosia: Nahazo ny loka Runet ny “Help Map”
Rosia 23 Avrily 2018
Nahazo ny Loka Runet 2010 lehibe indrindra tamin'ny sokajy " Fanjakana sy ny Fiarahamonina" ny Toniandahatsoratry ny Runet Echo Grisha Asmolov and Alexey Sidorenko .
Rosia 20 Avrily 2018
Rosia 18 Avrily 2018
Ary raha manakaiky ny farany ho tonga any amin'ny fanapahan-kevitra hanakana ny fampiasa ny tolona maharitra herintaona ifanaovan'ny Telegram sy ny manampahefana rosiana, nisy fahamaimaizana ary matetika lasa manamaivamaivan-javatra ny setrin'ny filazana.